/ब्लग/ग्यालरी/कसरी Flibanserin एक महिलालाई सेक्स हार्मोनको रूपमा मद्दत गर्दछ
प्रकाशित 11 / 11 / 2019 by 阿斯劳 मा लेखियो ग्यालरी.
यौन रोग पुरुषहरूमा सामान्य मानिन्छ, र उनीहरूको लागि भाग्यशाली; त्यहाँ भियाग्रा बाट सबै छनौट गर्न विकल्प विकल्पहरूको एक सीमा छ, Cialis, र ED ड्रग्स। तिनीहरूसँग हार्मोनल उपचार पनि छ उनीहरूको सेक्स ड्राइभलाई पुनर्स्थापना गर्न मद्दत गर्न। महिलाहरू यसमा एक्लो छोडिएको महसुस गर्छन्। भाग्यवस, उनीहरूसँग विकल्पहरू पनि छन्। तिनीहरू अब हराएको यौन इच्छा संग संघर्ष गर्नुपर्दैन, एक समस्या जुन यति धेरै सम्बन्ध बिच्छेद भएको छ। फ्लिबान्सेरिन (167933-07-5) को साथ, उनीहरूसंग यौन चासो बढाउने एक तरीका छ।
फ्लिबानसेरिन के हो?
फ्लिबानसेरिन (167933-07-5), जुन नाम अन्तर्गत बेचिन्छ Addyi महिलामा प्रीमेनोपौसल मुद्दाहरूको उपचारका लागि प्रयोग गरिएको एक औषधि हो, विशेष गरी जो hypoactive यौन इच्छा अवरोधका साथ। तपाईले सोध्नु भएको hypoactive यौन इच्छा विकार के हो? यो एक यस्तो अवस्था हो जुन कम यौन चाहनाहरू द्वारा वर्गीकृत गरिएको हुन्छ, जसको परिणामस्वरूप व्यक्तिगत कठिनाई वा समस्या हुन सक्छ। यो डिसअर्डर एकमुष्ठ स्वास्थ्य मुद्दाहरू वा सम्बन्ध समस्याहरूको परिणामको रूपमा हुनुहुन्न। साथै, यो एक मुद्दा होईन जुन औषधी वा औषधि पदार्थको प्रयोगको परिणामको रूपमा आउँदछ।
तपाईंले त्यो नोट गर्नुपर्दछ Flibanserin पहिले नै रजोनिवृत्तिमा पुगेका महिलाका लागि होइन। साथै, यो पुरुषहरूको लागि उपयुक्त छैन। यो औषधि एक विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत प्रस्ताव गरिएको छ, यसको मतलब एक व्यक्ति यो औषधि प्राप्त गर्नु अघि यस कार्यक्रममा दर्ता गर्नुपर्दछ। यस कार्यक्रमले प्रयोगकर्ताहरूलाई यस औषधिको प्रयोगसँगै आउने फाइदाहरू र जोखिमहरू सिक्न मद्दत गर्दछ, र यस तरीकाले उनीहरूले यो उचित हो कि हुँदैनन् भन्नेमा उनीहरूले राम्रो निर्णय लिन सक्दछन्। साथै, प्रयोगकर्ताहरूले यो नोट गर्नु पर्दछ कि यो औषधी यौन प्रदर्शन बृद्धि गर्नेको रूपमा प्रयोग गर्न मिल्दैन। यसको सट्टा, यो अन्तर्निहित कारण बिना यौन इच्छा कम भएका मानिसहरूलाई मद्दतको लागि हो।
कसरी महिलाहरूको लागि फ्लिबान्सेरिनले काम गर्छ?
धेरै महिला यस उत्पादन प्रयोग बारे सचेत छन् र तिनीहरूले यो प्रयोग गर्नु पर्छ कि हुँदैन भनेर निश्चित छैनन्। कारण कारण, तिनीहरू डराउँछन् कि यसले काम नगर्न सक्छ। सत्य यो हो कि यो उत्पादनले काम गर्दछ, यसले सबैका लागि काम गर्दैन। सबैजनाले यसलाई फरक तरीकाले प्रतिक्रिया गर्दछन्, र किनभने यो अरू कसैको लागि काम गरेको हो भन्दैमा यो तपाइँको लागि उस्तै तरिकाले कार्य गर्दछ भन्ने होइन। जे होस्, ती 60% जसले यो औषधि प्रयोग गर्थे उनीहरूले सकारात्मक समीक्षा दिए र रिपोर्ट गरे कि औषधिले उत्कृष्ट नतिजा प्रदान गर्‍यो।
मुख्य प्रश्न, तथापि, हो; यस्ले कसरी काम गर्छ? परिणामहरू उत्पादन गर्न यस औषधिले प्रयोग गरेको मेकानिमेसनमा स्पष्ट रूपमा भेटिएको छैन। यद्यपि, सेरोटोनिन यौन कार्य रोक्नको लागि उत्तरदायी छन् भन्ने तथ्यलाई पछ्याउँदै अनुसन्धानकर्ताहरूले एउटा सिद्धान्त ल्याएका छन्, र तिनीहरूले पत्ता लगाए कि फ्लिबानसेरिन (167933-07-5) दिमागमा सेरोटोनिन गतिविधि कम गर्दछ। यसले बदलामा महिलाको यौन चाहनालाई बहाल गर्दछ। साथै, औषधीले नोरेपाइनफ्राइन र डोपामाइनमा केही अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ, जुन बृद्धि भएका यौन इच्छाहरूमा पनि जोडिएको छ।
भियग्रा र पुरुषसँग सम्बन्धित अन्य यौन सम्बन्धित औषधीहरूको विपरीत यो औषधि मुख्य रूपमा दिमागलाई लक्षित गरेर काम गर्दछ। यसले न्यूरोट्रान्समिटरको स्तर बढाउँदै गर्दछ जुन तपाईंको मस्तिष्कले यौन चासो जगाउन प्रयोग गर्दछ।
सामान्यतया, औषधिले दुई मुख्य मानसिक बटनहरू तल धकेल्छ जुन यौन इच्छालाई बढावा दिनको लागि जिम्मेवार छ जबकि न्युरोट्रान्समिटरहरूलाई निषेध गर्दछ जुन महिलामा हुने यौन चासोलाई दबाउन जिम्मेवार छ। यो औषधि बजारमा फिर्ता 2015 मा पेश गरिएको थियो जब एफडीएले यसलाई प्राप्त गरेको उपचारको लागि अनुमोदन गर्‍यो HSDD महिलामा।
कस्तो प्रकारको महिलाले यस औषधिबाट फाइदा लिन सक्दछ भन्ने बारे कुनै स्पष्ट जानकारी नभए पनि यो सुरक्षित छ कि यो औषधी स्वाभाविक रूपमा हराएको यौन चाहनाहरूको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ। यसको मतलव यो केवल तब मात्र काम गर्दछ यदि हराएको यौन रुचिहरुका लागि कुनै सही अन्तर्निहित लागत छैन, जस्तै सम्बन्धमा रुचि हानि वा अन्य ड्रग प्रभावको कारण। साथै, यो रजोनिवृत्ति प्रभावसँग काम गर्नेहरूको लागि होईन। ड्रग एचएसडीडीका साथ महिलामा परीक्षण गरिएको थियो। महिलाहरू सबै दीर्घकालीन स्थिर सम्बन्धहरूमा थिए, यसको मतलब कि उनीहरूको समस्या एक दुखी सम्बन्धको परिणामको रूपमा थिएन। विगतमा उनीहरूसँग यौन इच्छा थियो र उनीहरू चिन्तित थिए कि उनीहरूले बिस्तारै यसलाई हराइरहेका छन् र यसलाई फिर्ता प्राप्त गर्ने उपाय खोजी गरिरहेका छन्।
यी महिलाहरूले यस मुद्दाको बारेमा करीव years बर्षसम्म अनुभव गरेका थिए, र उनीहरूले दाबी गरे कि उनीहरूको प्रेम साझेदार वा अरू कसैको लागी उनीहरूको यौन इच्छा थिएन। लगभग 50-60% महिलाहरूले औषधीको लागि राम्रो प्रतिक्रिया देखाईन्, जबकि अरूले नकारात्मक प्रतिक्रिया देखाए। केहीले आफ्नो साथीहरूको भन्दा अन्य व्यक्तिको लागि यौन इच्छा प्राप्त गरे, र त्यसैले तपाईंको शरीरले कसरी औषधोपचारप्रति प्रतिक्रिया दिनेछ भन्ने बारे कुनै स्पष्ट जानकारी छैन।
अन्य सामान्य सोधिने प्रश्न यो यो छ कि यो औषधि कसरी काम गर्दछ अन्तर्गत कति लामो समय लाग्छ परिणामहरू हेर्न। फेरि, यो पक्ष एक व्यक्ति देखि अर्को फरक हुन सक्छ, मुख्य किनभने यो फरक प्रतिक्रिया गर्दछ। यद्यपि परीक्षणहरूले सुझाव दिन्छ कि यसले पहिलो परिणामहरू देख्न चार हप्ता सम्म लिन सक्दछ र अधिकतम परिणामका लागि बाह्र हप्ता सम्म। तपाईंले परिणामहरू हेर्नका लागि तपाईंले यसलाई सही रूपमा प्रयोग गर्नु आवश्यक छ।
विशेषज्ञहरु द्वारा सिफारिस गरिएको खुराक 100mg हो, जुन मौखिक रूपमा लिनु पर्छ, प्रति दिन एक पटक। यो उत्तम हो यदि ओछ्यानमा वा आराम समयमा प्रयोग गरियो। यो किनभने काम गर्ने घण्टाको बखत यो औषधि लिने वा तपाइँको शरीर सक्रिय छ जब तपाइँलाई Syncope, केन्द्रीय स्नायु प्रणाली उदासीनता, उच्च रक्तचापको जोखिममा पार्छ, वा तपाइँ कुनै दुर्घटनामा पर्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईं एक खुराक याद गर्नुभयो भने के हुन्छ?
यदि तपाईंले मिस गर्नुभयो भने Flibanserin सुत्ने समयमा खुराक, यो सिफारिश छ कि तपाईं अर्को सुत्ने समय सम्म प्रतीक्षा गर्न औषधि प्रशासन गर्न।
ADDYI अधिक मात्रा
यस औषधीलाई ओभरडोज गर्ने मतलब तपाईले छिटो नतीजाहरु पाउनुहुनेछ भन्ने होइन। साटोमा, यसले तपाईलाई साइड इफेक्ट मात्र ल्याउनेछ। यो सुझाव दिइन्छ कि यदि तपाइँ दुर्घटनावश अधिक मात्रामा जानु भयो वा तपाइँले श done्का गर्नुभयो कि तपाइँले त्यसो गर्नुभएको हो भने, तुरून्त मेडिकल उपचार खोज्नुहोस्।
तपाईं कहिले यसको प्रयोग बन्द गर्नुहुन्छ?
तपाईंले यस औषधिको प्रयोग आठ हप्ता पछि कुनै सुधार नगरी उपयोग गर्न बन्द गर्नुपर्दछ। माथि उल्लेख गरिए अनुसार औषधि बिभिन्न व्यक्तिमा बिभिन्न किसिमले काम गर्दछ। केहि परिणाम तुरून्त देख्न सुरू गर्न सक्दछ, जबकि केहि केहि समय लिन सक्दछ। यद्यपि, यसले तपाईंलाई आठ हप्ता भन्दा बढी लिन सक्नुहुन्न अलिकता पनि सुधारको अनुभव लिन। यदि त्यसो भयो भने, यसले उत्पादनहरू तपाईंको लागि सही छैन भनेर देखाउँदछ, र यो उत्तम हो यदि तपाईं यसको प्रयोग बन्द गर्नुभयो भने।
परिस्थितिमा निर्भर गर्दै, तपाईं CYP3A4 अवरोधकर्ताहरूको आधारमा तपाईंको खुराकलाई मध्यम वा मजबुतमा परिमार्जन गर्न सक्नुहुनेछ। यो सिफारिश गरिएको छ कि यदि तपाईं मध्यम वा बलियोको आधारमा फ्लिबानसेरिनको प्रयोग प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ CYP3A4 इनहिबिटर, र त्यसपछि तपाइँ CYP3A4 अवरोधकर्ताको अन्तिम खुराकबाट करीव दुई हप्ता पछि सुरू गर्नुपर्दछ। यदि तपाईं FYBANSERI को उपयोग अनुसार CYP3A4 अवरोधक परिमार्जन गर्न चाहानुहुन्छ भने, तपाईंले यसलाई अघिल्लो Flibanserin खुराकको दुई दिन पछि गर्नुपर्छ।
तपाईंले यो नोट गर्नु पर्दछ कि यो औषधि अधिग्रहित एचएसएसडी भएकाहरूको लागि आदर्श हो, यसको मतलब यो समस्या त्यस्तो व्यक्तिहरूमा देखा पर्दछ जुनसँग स्वास्थ्य जटिलताहरू थिएनन्। साथै, समस्या अन्य पदार्थहरूको परिणामको रूपमा वा रजोनिवृत्तिको कारण हुनु हुँदैन। यदि तपाईंसँग स्थिति, पार्टनर, वा उत्तेजनाको पर्वा बिना HSDD छ, तब यो उत्पादन तपाईंको लागि हो। यदि तपाईंले यौन इच्छाहरू हराउनुभएको हुनसक्छ सायद तपाई तनावग्रस्त हुनुहुन्छ, काममा व्यस्त हुनुहुन्छ, वा तपाई आफ्नो पार्टनरसँग राम्रो सम्बन्धमा हुनुहुन्न भने, यो औषधी तपाईलाई आफ्ना समस्याहरू समाधान गर्न आवश्यक छैन। यो यौन प्रदर्शन बढाउनको लागि होईन, बरु यो यौन उत्प्रेरणालाई उत्तेजित गर्नको लागि हो। साथै, यो पुरुषहरू द्वारा प्रयोग गर्नु हुँदैन।
फ्लिबान्सेरिन प्रयोग गर्दाका साइड इफेक्टहरू के हुन्?
सबै फाइदाहरूका केही साइड इफेक्ट पनि छन्। मुख्य Flibanserin को फाइदा यो यो सेक्स ड्राइव मा एक ध्यान दिएर वृद्धि प्रदान गर्दछ। यो दुबै वैज्ञानिक अनुसन्धान र किस्सा परीक्षणहरूका साथ एचएसडीडी उपचारको रूपमा पूर्ण रूपमा काम गर्दछ यसले देखाउँदछ कि यसले यौन इच्छा र चासो बढाउँदछ। जे होस्, औषधी जहिले पनि प्रभावकारी हुँदैन, र तपाईंले यसलाई खुला दिमागले प्रयोग गर्नुपर्दछ। औषधी अस्तित्वमा रहेको औषधि वा अन्य स्वास्थ्य वा शारीरिक सीमितताको परिणामले हराएको यौन इच्छाको उपचारको लागि होइन। साथै, यो उपयोगी छैन यदि तपाईं हाल अन्य मेदहरू प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ जुन तपाईंको यौन इच्छालाई असर गर्न सक्छ, जस्तै एन्टिडेप्रेसन्ट। यदि तपाइँ औषधि प्रयोग गर्न योग्य हुनुहुन्छ कि छैन र यो तपाइँको लागि काम गर्दछ भने निर्धारित गर्न तपाईले आफ्नो डाक्टरले पहिले मूल्याate्कन गर्न दिनु पर्छ।
यदि तपाईंसँग हृदय रोग, रक्तचाप, वा मधुमेह जस्ता कुनै अन्तर्निहित स्वास्थ्य समस्याहरू छन् भने तपाईंले यो औषधि प्रयोग गर्नु हुँदैन। औषधि प्रयोग गर्नु अघि तपाईको चिकित्सकले तपाईलाई समस्याहरूको व्यवस्थापन गर्न मद्दत पुर्‍याउनु पर्छ।
प्रयोगको लागि अनुमोदन भन्दा पहिले, ड्रग्सको प्रयोगको लागि सुरक्षित छ कि छैन भनेर निर्धारण गर्न एफडीएद्वारा परीक्षण गरिनु पर्छ। जे होस्, ADDYI ती औषधिहरू मध्ये जुन पूर्ण रूपमा निर्धारण गरिएको छैन कि तिनीहरू प्रयोगको लागि सुरक्षित छन् कि छैनन्। लिबिडो बृद्धि गर्न र हराएको यौन इच्छा भएका ती महिलालाई सहयोग गर्न औषधी अत्यन्त उपयोगी साबित भएको छ। यो लाभ र एक महान सम्बन्ध बचाउन को रूप मा एक दायरा को लागी पाइएको छ। जे होस्, एफडीएले पत्ता लगायो कि औषधि केहि साइड इफेक्टको साथ आउँदछ, सबै चक्कर, निन्द्रा, र मतलीबाट। ती साधारण हुन् फ्लिबानसेरिन साइड इफेक्ट, तर एफडीए दुई महत्त्वपूर्ण साइड इफेक्टको बारेमा चिन्तित थियो जुन मानिसहरूलाई चिन्ता गर्नु पर्छ कुन हो;
यदि दुरुपयोग गरियो भने, यो औषधिले बेहोश पार्ने प्रभावहरू छन्, र केही व्यक्तिहरूले शान्त, सुस्त निद्रा प्राप्त गर्ने प्रयास गर्दा यसलाई गलत कारणहरूको लागि प्रयोग गर्छन्। यदि यो हुन्छ भने, प्रयोगकर्ताहरू उनीहरू भन्दा बढी घण्टा सुते। यसले बदलामा उनीहरूको उत्पादकतालाई मुख्यतया प्रभाव पार्छ मुख्यतया एकाग्रता नभएको र गलत घण्टाको समयमा निदाएको कारण।
रक्तचाप ड्रपको कारण बेहोस
यो सब भन्दा खतरनाक साइड इफेक्ट हो, र यो प्रायः जब औषधि गलत समयमा प्रयोग गरिएको हुन्छ। माथि उल्लेख गरिए अनुसार औषधी निद्रा वा आरामको बखत प्रयोग गरिनु पर्दछ। जाग्ने घण्टाको बखत वा जब तपाईंको शरीर सक्रिय छ रक्तचाप ड्रपमा परिणाम दिन्छ र तपाईंलाई बेहोश बनाउँदछ।
फ्लिबानसेरिनका लागि के चेतावनीहरू छन्??
जब रक्सीको साथ प्रशासित गरिन्छ, यो औषधिले महत्वपूर्ण रक्तचाप ड्रप निम्त्याउन सक्छ, जसले गम्भीर चक्कर, थकान, र बेहोराको परिणाम दिन्छ, र तपाईं यी साइड इफेक्टको कारण पनि बेहोश हुन सक्नुहुन्छ। यो सिफारिश गरिएको छ कि एकचोटि तपाईंले Flibanserin प्रयोग गर्न थाल्नुभयो, तपाईंले रक्सी पिउनु हुँदैन। अलिकता पनि थोरै रक्सीले पनि उल्लेखित साइड इफेक्टहरू निम्त्याउन सक्छ।
मध्यम वा बलियो CYP3A4 इन्डिटरहरूको साथको समिकरण
यदि कडा वा मध्यम YP3A4 अवरोधकर्ताहरूको साथ प्रयोग गरिएको छ भने, तपाईंले फ्लिबानसेरिनको बृद्धि एकाग्रता अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ, जुन ओभरडोज गर्ने जस्ता हुनेछ। यसले बदलामा तपाईलाई यस पदार्थलाई ओभरडोज गर्ने साइड इफेक्टको अनुभव दिनेछ। यसको साथमा, तपाईंले यो नोट गर्नु पर्दछ कि यी अवरोधकर्ताहरूको प्रयोग contraindated छ, यसको अर्थ यो हो कि यदि तपाईंले परिस्थितिबाट जबरजस्ती गरेमा यसलाई प्रयोग गर्नु पर्छ।
कलेजो अशक्तता भएका बिरामीहरूमा कन्ट्राइन्डिकेटेडt
कलेजो कमजोरीका साथ व्यक्तिलाई औषधि सिफारिस गर्न मिल्दैन जबसम्म एक चिकित्सा विशेषज्ञको सहयोग बिना। यो सिफारिश गरिएको छ कि तपाईं एक चिकित्सकको सल्लाह खोज्नुहोस् जसले तपाईंलाई यो औषधि प्रयोग गर्न अघि जिगर कमजोरी व्यवस्थित गर्न मद्दत गर्दछ। अध्ययनहरूले देखाए कि फ्लिबानसेरिन (167933-07-5) ले स्वस्थ कार्य गर्ने कलेजोको तुलनामा कलेजोको कमजोरी भएकाहरूसँग जोखिम बढायो जसले उनीहरूलाई सिन्कोप, हाइपोटेंशन, र केन्द्रीय स्नायु प्रणाली उदासीनता बढी जोखिममा पार्छ।
गर्भावस्था र स्तनपान
कुनै स्पष्ट अध्ययनहरूले संकेत गरिरहेको छैन कि यो उत्पादनले गर्भवती वा स्तनपान गराउने महिलालाई कुनै जोखिम दिन्छ। जनावरहरूमा गरिएको एक परीक्षण अनुसार, यसले विषाक्तता केवल मातृ विषाक्तताको उपस्थितिमा मात्र भएको देखायो। यस्तो अवधिमा प्रभावको केहि वजनहरू, निन्द्रा, र चक्कर आउँछ। जनावरहरू सामान्य भन्दा बढी सुते। केहि जनावरले प्रजनन र विकासात्मक प्रभाव अनुभव गरे, संरचनात्मक विसंगतिहरू र तौल घटाउने सहित।
यो अझै निर्धारण गर्न सकिएन यदि Flibanserin पाउडर (167933-07-5) मानव स्तन दुध वितरण मा कुनै प्रभाव छ, र यो स्तनपान शिशुहरु मा कुनै प्रभाव छ कि यो अज्ञात छ। मुसामा गरिएको अध्ययनले देखायो कि यो औषधी मुसाको दुधमा पसारिएको थियो। यससँग, यो सुरक्षित छ कि गर्भवती वा स्तनपान गर्नुहुँदा Flibanserin को उपयोग स्तनपान गराउने महिलाहरु जस्तै बेहोराको रूपमा सम्भावित प्रतिकूल प्रभाव पार्छ, र यसले स्तनपान गराउने शिशुलाई पनि असर गर्न सक्छ।
Flibanserin वजन कम गर्न सक्छ
धेरै अध्ययन र पोस्ट हक विश्लेषणका अनुसार, पोस्टमेनोपाउसल र प्रेमेनोपाउसल महिला जसले हाइपोएक्टिभको लागि यो औषधि प्रयोग गर्थे लैंगिक इच्छा डिसअर्डरले वजन कम गर्ने सम्भावना हुन्छ। सामना गरौ। धेरै महिलाहरू आफ्नो तौलको बारेमा सचेत छन् र प्रतिकूल रूपमा आफ्नो वजन असर गर्दछ कि केहि प्रयोग गर्न डराउँछन्। यो FliBASERIN प्रयोग कुनै मानव वजन मा प्रभाव गर्दैन भनेर थाहा पाउँदा यो एक आश्वासनदायी भावना हो, तर यसको सट्टा, यसले उनीहरूलाई वजनको महत्त्वपूर्ण मात्रा बसाउन मद्दत गर्दछ। यदि तपाईं तौल समस्यासँग संघर्ष गर्दै हुनुहुन्छ र यसलाई बगाउन कुनै सहज मार्गको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भने, यो औषधि एक प्लस हो।
यस बारेमा अनुसन्धान महिलालाई आश्वासन दिनको लागि गरिएको थियो, तर तिनीहरू सुरक्षित छन् किनकि तिनीहरू मध्ये अधिकांश औषधी लिन अनिच्छुक छन्। धेरै जसो एन्टिडीप्रेसन्टहरू तौल बढाउनका लागि परिचित छन्, र महिलाहरू डराउँदछन् कि यस उपचारले यस्तै प्रभावहरू ल्याउनेछ।
मुद्दा यो तथ्यको कारणले भयो कि यो ड्रग एक नाबालिग 5-HT2C रिसेप्टर हो 5-HT2C एगोनिस्ट मुख्यतया वजन घटाउनसँग सम्बन्धित छ, यसका लागि एफडीए द्वारा अनुमोदन भएको थियो र फ्लीबेंसरिन एक नाबालिग महिलाले यसको कारण हुने धारणा प्रदान गर्‍यो। ती तौल को लागी।
फ्लिबानसेरिन खरीद गर्दै
उत्तम परिणामहरूको आनन्द लिने एक मात्र तरिका यदि तपाईं हो भने Flibanserin किन्नुहोस् एक विश्वसनीय विक्रेता बाट। यस उत्पादनको बढ्दो मागको साथ, त्यहाँ आपूर्तिकर्ताओंमा वृद्धि भएको छ जसले फ्ल्याबान्सरिनको उत्तम गुण प्रदान गर्ने दावी गर्दछ। जबकि केहि हृदय मा तपाइँको सबै भन्दा राम्रो चासो छ, केहि हताश खरीददारहरू घोटाला पछि मात्र हो। तपाईं सुनिश्चित गर्न चाहनुहुन्छ कि तपाईं एक प्रदायकबाट उत्पादन प्राप्त गर्नुहोस् तपाईं विश्वास गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईं पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ Flibanserin पाउडर जहाँ तपाईं मौखिक रूपमा प्रशासन गर्नु अघि समाधान बनाउँनुहुन्छ। तपाइँको समय लिनुहोस्, सहि फेला पार्न पूर्ण अनुसन्धान गर्नुहोस् बिक्रीको लागि Flibanserin। ड्रग्स एक संवेदनशील उत्पादन हो, र एक गलत प्राप्त गर्नाले तपाईंको अवस्था पहिलेको भन्दा झन् खराब बनाउन सक्छ।
अंतर्निहित कारण बिना यौन इच्छा गुमाएका महिलाहरूका लागि फ्लिबानसेरिन एक उत्कृष्ट समाधान साबित भएको छ। जे होस्, तपाईले यस उत्पादनको उत्तम गुण प्राप्त गर्नुपर्नेछ र परिणामहरू हेर्न उचित तरीकाले प्रयोग गर्नुपर्नेछ। साथै, तपाइँ यसलाई खुला दिमागका साथ प्रयोग गर्नुपर्दछ र नोट गर्नुहोस् कि यसले तपाइँको लागि काम नगर्न सक्छ साथै यो अरू कसैको लागि पनि काम गरेको थियो। तपाईं फिट उम्मेद्वार हुनुहुन्छ कि भनेर निर्धारण गर्न यसको प्रयोग गर्न सुरु गर्नु अघि चिकित्सकको सल्लाह लिन नबिर्सनुहोस्।
जेन म्याकक्ल, महिला भियाग्रा फ्लिबानसेरिन: हाइपोएक्टिभ यौन इच्छा विकार (एचएसडीडी) को उपचार सम्बन्धी पूर्ण गाईड र तीव्र कामवासना प्राप्त गर्न र दु: खको भावना हटाउन महिला लिबिडोको बृद्धि; 1724181459
अमेजन डिजिटल सेवाहरू LLC - Kdp प्रिन्ट युएस, २०१,, गुलाबी भियग्रा (फ्लाबान्सेरिन): महिला यौन संवर्धन गोलीमा पुस्तक गाईड जसले सेक्स ड्राइभलाई बढावा दिन्छ र महिलालाई बहुविध संभोग प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ, १2018२ 1729471161 XNUMX१XNUMX१XNUMX
बोर्सिनी एफ, इवान्स के, जेसन के, रोहडे एफ, अलेक्ज्याण्डर बी, Pollentier एस (२००२)। "Flibanserin को फार्माकोलजी"। CNS औषधि समीक्षा। ((२): ११–––२।
SARM SR9009 शरीर सौष्ठव को लागी एक पूरा खरीद गाईड
शीर्ष 10 टेस्टोस्टेरोन एस्टर: जो तपाईंको लागि सही छ?
Oxandrolone (Anavar) को बारेमा सबै कुरा, तपाईंले थाहा पाउनु आवश्यक छ	कसरी पायिडिडोसाइन हाइड्रोक्लोराइड (भिटामिन B6) शरीर सौष्ठवहरूको लागि काम गर्दछ